Sucuudiga oo kusoo rogay cashuur bil walba qoysaska shisheeye ee deggen ee ka shaqaysta - Horn Future
Sucuudiga oo kusoo rogay cashuur bil walba qoysaska shisheeye ee deggen ee ka shaqaysta
Riyadh (Horn Future)-Qoyska Sucuudiga ee maamula dhulka barakaysan ayaa bilaabay inay ku soo rogaan cashuur bil walba qoysaska deggan ee shisheeye ee ka shaqeeya waaxaha gaarka ah iyo shaqaalahooda,taas oo qiimeheeda lagu qiyaasay( $ 26.6,million) malyuun oo dollar sida ay qortay warbaahinta caalamku.
Tallaabadan cusub ee qoyskan ayaa lagu tilmaamay mid uu ku ururinayo lacago dheeraad ah si ay ugu kabaan hoos u dhaca ku yimiday miisaaniyadooda kadib markii uu hoos u dhacday qiimaha shidaalku.
Qoyska Sucuudiga ayaa cadeeyay in dadka uu saameeynayo g’aanka cashuurtani ay yihiin xigtada dadka shisheeye ee deggen boqortooyadan,iyo sidoo kale shaqaalaha iyaku ay waxa loo yaqaano kafaaladda ay u yihiin iyo dhallaanka dhawaan dhashay.
Waaxda socdaalka u qaabilsan qoyskan ayaa ku sheegtay war qoraal ah oo lagu faafiyay wakaaladda wararka u qaabilsan qoyskan in go’aankani uu dhaqan galay maalintii ugu horraysay ee bishan July, iyada oo tilmaamtay in qiimaha canshuurtan ay labalaabmi doonto oo ay u gaadho doonto bisha July sanadka 2020 ilaa $ 106.6 bishiiba.
Waxa qoyska Sacuudiga dhakhliga ugu weyn ee soo gala uu ku tiirsanaa shidaalka uu u dhoofiyo dunida oo ah kan ugu badan dunida,kaas oo uu ku yimiday hoos u dhac aad u ba’n qiimaha lagu iibiyo dunida sicirka sanadkii 2014 oo gaadhay (40$ dollar) barmiilkii,iyada oo dhaqaaliyahanadu ay saadaalinayaan inuaa gaadho wax ka hoseeya(30$ dollar) taas oo laga cabsi qabo inuu burburo dhaqaalaha qoyskan oo ku tirsanaan.
Waxa la filayaa in uu gaadho hoos u dhaca ku yimiday dhaqaalaha ee miisaaniyadda sanadkan oo dhan ee qoyskan Sucuudiga,ilaa( $ 53 billion) milyaar oo dollar,kadib hoos u dhicii ugu weynaa ee sanadkii la soo dhaafay oo sababay in la dhimo taageerada taliskani uu bixinayay iyo dib u dhacyada mashaariicda iyo hakinta ku meel gaadhka ah oo ku saabsan mushaharka waaxaha maamulkan.
Canshuurtan cusub ee lagu soo rogay qoysaska dadka deggan ee shisheeye iyo shaqaalaha ku jooga waxa loo yaqaano kafaaladda ama wakiilka ayaa tiradooda guud lagu qiyaasay ku dhawaad 2.2 malyuun oo qof.
Dadka shisheeyaha oo isku gu jira jinsado kala duwan ee ku nool dhulka barakaysan ee qoskani maamulo ayaa waxa kamid ah Soomaali,waxana dadkani ay ku deggan yihiin dhulkan waxa loo yaqaano kafiilka oo ah qaab guumeeysi.
Waxa habkan kafiilnimadu dadkan uu ka yeelay in loola dhaqmo sida adoomaha iyada oo habkani uu ka dhigay la haystayaal sharciyayasan oo aynan ka hadli karin xuquuqdooda aasaasiga ah gaar ahaan marka xadguduubyo ay kasoo gaadhaan cida kafiilka ah,hadii kale ay mutaystaan in dalka laga musaafuriyo.
Qoysaska ay kasoo jeedaan dadkan ee ay ku jirto Soomaalidu looma oggola caruurtooda ku dhalatay dhulkan sida waxbarashada heer jaamacadeed,iyada qoysaskan ay ku kalifto in caruurtooda ay u diraan jaamacado dalalka dibada sida dalalka kale ee Carabeed, India,Malaysia iyo dalal kale.
Si kastaba ha ahaatee shidaalka dhulka barakaysan ee qoskani maamulo laga dhoofiyo ayaa ah kan ugu badan ee dunida loo dhoofiyo,waxana hantida qoyskani ka helo lagu tilmaamay mid saqafka samada ku tolan tan iyo markii la bilaabay dhoofinta khayraadkan muddo ku dhow 70 sanadood.
Warbixino ay faafiyeen wargaysyada reer Galbeed ayaa waxa ay tilmaameen sida xad-dhaafka ah ee qoyskani ugu tagri-falo hantida kasoo gasho shidaalka,waxana warbaahintania ay xaqiijisay in amiirada qoyskani ay ku bixiyaan boqolaal malyuun oo dollar ciyaarta khamaarka ee loo yaqaano (Casino) ga marka lagu daro in lagu maal-galiyo boqolaal televeshano ah oo lagu fasaadiyo ummadda iyo sido kale in lagula dagaalamo bulshada isbadil doonka ah ee gobolka sidii ka dhacday dalka Masar.
Boqorkii dhintay ee Fahad ayaa waxa uu habeenki kaliya khasaaray khamaar uu ciyaaray ($84 million) malyuun oo dollar magaaladda Monte Carlo ee kutaala Fransiiska sida ay qortay warbaahinta reer Galbeedku.
Waxa xusid mudan in dhawaanta qoyskani ugu deeqay (100$ million) malyuun oo dollar urur ay leedahay xaaska Donald Trump kadib booqashadii dhawaanta uu ku tagay,xilli ay ku sugan yihiin nolol aad u ba’an bulshada ku nool dhulka barakaysan ee uu maamulo qoyskani,waxana ururada caalamigu ay sheegeen in shaqo la’an ka jirta lagu qiyaasay 30%.
« L’entretien complet avec le président turc Recep Tayyip Erdoğan sur la France 24+video	» India sends more troops to Jammu and Kashmir